Ungatsho njani ukuba hayi kuMhla - Ukuthandana Tips
Ungatsho njani ukuba hayi kuMhla
Awunyanzelekanga ukuba uthi ewe kuumhlangenxa yokuba umntu ekubuza. Iindaba ezimnandi kukuba awunyanzelekanga ukuba ube krwada xa usala isimemo somhla ukuze ufumane inqaku lakho.
Abantu abaninzi - abasetyhini, ngakumbi- banexesha elinzima lokuthi hayi xa bebuzwa ngomhla. Uninzi lwaba bantu, aboyiki nje ukwenzakalisa iimvakalelo zomntu, kodwa kananjalo banoloyiko malunga nokwenza loo mntuenomsindo. Kubalulekile kule meko ukukhumbula izinto ezimbini:
Awunoxanduva lweemvakalelo zabanye abantu.
Nabani na ophendulayo ekujikelweni komhla onomsindo asingomntu ufuna ukuthandana naye kwasekuqaleni.
Ungawunciphisa njani uMhla ngokuChubekileyo (kwaye kwangoko)
Into Oyithethayo Kwisindululo Somtshato
Ukubuzwa kumhla luhlobo oluthile lokuthotywa, ke akukho nto iphosakeleyo ngokubulela umntu othile ngokukubuza ngomhla - nokuba uyala. Ukuba ufuna ukwandisa ngaphaya kwempendulo ka'hayi, enkosi 'ungongeza ukuqiqa, kodwa qiniseka ukuba iyinyani kwaye ayishiyi umnyango uvulelwe umhla kwixesha elizayo ukuba ayisiyiyo le uyifunayo.
Kulungile: 'Hayi enkosi. Umsebenzi wam kunye neeshedyuli zesikolo zenza ukuba kube nzima ukongeza ukuthandana emfanekisweni. '
Okubi: 'Hayi enkosi. Okwangoku ishedyuli yam ixakeke kakhulu ... kodwa mhlawumbi ngexesha elizayo xa izinto zihamba kancinci. '
Xa Ingxaki Kukubo
Ayisoloko ishedyuli exakekileyo enyanzela umntu ukuba ale isimemo somhla. Ngamanye amaxesha, awufuni kuphuma nomhla kunye naloo mntu. Xa ujika umhla, akufuneki uthuke umntu. Kukho abantu abathile abafuna ukuxelelwa ngokucacileyo ukuba awunomdla, kungenjalo, baya kuqhubeka. Kuyenzeka ukuba uxelele umntu ukuba awunamdla kubo ngaphandle kokuba ukhohlakele. 'Andikuboni unje' okanye 'andifuningaphezu kobuhloboezivela kuwe 'zombini zilungile ukuba ziyinyani.
Akukho Via Umbhalo
Ngokufanelekileyo, ukuxelela umntu ubuso ngobuso ukuba awunomdla kumhla kunempembelelo enkulu kuba akukho ndawo yokutolika, kodwa ukuba kuphela kwendlela onokubachazela ngayo ngokubhaliweyo okanye ngomyalezo okwi-Intanethi, kulula ukuba ucace amagama. Kufanelekile ukuhamba ngale ndlela ukuba eyona ndlela iphambili yonxibelelwano ayiqhelekanga ubuso ngobuso okanye ukuba unoloyiko malunga nokusabela komntu ngokubonakalayo ekugatweni.
Ukuba uyavuma kumhla kwincoko yobuso ngobuso kwaye emva kokuthatha ixesha lokucinga ngayo, uthathe isigqibo sokuba awufuni kuhamba emva kwayo yonke, akulunganga ukubhalela okanye ukuthumela umyalezo umntu lowo ukuba abuyele . Ukutshintsha ingqondo kulungile, kodwa ukufihla ngasemva kwescreen ukubuyela ngaphandle kukrwada. Nika umntu imbeko yokuthetha naye ubuso ngobuso malunga nokungafuni ukuya. Zama into enje, 'bendicinga ngomhla wethu ngoMgqibelo kwaye ndiyaxolisa, kodwa ndithathe isigqibo sokuba ndingahambi. Andiqondi ukuba licebo elilungileyo elo. '
Ukuchaza Ukuqiqa Kwakho
Nokuba uzama ukugcina ukuqiqa kwakho kungangqalanga kumzamo wokugcina iimvakalelo zomntu, incoko iya kukhokelela ekubeni bafune izinto ezithile. Kuya kufuneka uthathe isigqibo, ngokusekwe kwinto oyaziyo ngalo mntu, ukuba ufuna ukunyaniseka ngokungathandekiyo ekubeni ungatsaleki emntwini, ungafuni ukuchitha ixesha uwedwa nabo, okanye nokuba siyintoni na isizathu. Nangona isenokuba buhlungu komnye umntu, inokuthi ekugqibeleni ibe ngamava okufunda abanokuthi bayisebenzise kubudlelwane bexesha elizayo. Kwelinye icala, awunatyala mntu kuba sisigqibo sakho sokwala umhla.
Hayi ukuya kuMhla weSibini
Mhlawumbi uqaphele kumhla wakho wokuqala nalo mntu ukuba izinto bezingacofwanga kwaye awufuni umhla olandelayo. Kule meko, kubalulekile ukuba unganikeli mpendulo engacacanga ukuba bathi, 'Kufuneka siphume kwakhona ngelinye ixesha.' Ungathetha into elula enje, 'Andicingi ukuba kufuneka sibe nomnye umhla.' Ngelixa isenokubonakala inzima ekuqaleni, eneneni inokuba yingozi kakhulu kunokuba unike umntu ithemba elingelolokwenyani lemihla ezayo 'isiporho'bona.
Hlala Unyanisekile Kuwe
Imihla ingaba yindlela enhle yokwenzasimazi ngcono umntu, kodwa ukuba iimvakalelo zakho zikuxelela ukuba uhlale kude nomntu, mamela. Ukwamkela umhla ongafuni ukuba ube mnandi kunokukhokelela ekuqhubekeni neemvakalelo zokugqibela kubo bonke ababandakanyekayo.
Igalelo Izibonelelo Zokujonga Ifanitshala Iintengiso Nama Brands Ukuzivocavoca Izixhobo Kunye Neapparel Abantwana' Toys
Ngaba isicoci sesandla sihamba kakubi kubushushu
I-twin flat sheet size kwii-intshi
indlela yokuyila iimpahla zakho
Ungazithengisa njani iincwadi kwi-ebay
zingaphi ezityhala ngemini
yeyiphi imoto ehamba ngehlosi